Ap1 Khabar | » के तपाइँले बाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको धार्मिक परिणाम के तपाइँले बाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको धार्मिक परिणाम – Ap1 Khabar
ए.पी. वन खबर २०७८ बैशाख ५, आईतवार ०९:१६
तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ ? टिप्नु पनि भएको होला रु यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् ।
हिन्दू धर्म दर्शनको मान्यता अनुसार सिक्का पैसा भेट्नु र नोट भेट्नुका फरक फरक अर्थ रहेका छन् । जमिनमा फेला परेको सिक्का पैसाको सम्बन्ध आध्यात्मिकतासँग छ ।
प्रतिकात्मक रुपमा कुरा गर्ने हो भने धनको अर्थ शक्ति, सत्ता र मूल्यसँग छ । यसको सम्बन्ध इतिहासका साथ पनि छ किनकी यो एक अर्कासँग पुग्छ ।